Firimu kuridza muchina Vagadziri - China Firimu kuridza muchina Vatengesi & Fekitori
LQSJ-A50、55、65、65-1 PE Yakakwira & yakadzika-kumanikidza Inovhuvhuta Firimu Machine
Inovhuvhuta Firimu Muchina extruder, humburumbira uye sikuruu tsvimbo dzakagadzirwa nehunhu hwesimbi simbi yakave yakagadziriswa uye yakagadziriswa nenzira chaiyo. Nekudaro iri mutsindo mukukutu, yakasimba mukuora kurwisa. Iyo yakasarudzika-yakagadzirirwa sikuru ndeye yemhando yepamusoro muplasticizing, iyo inobatsira kuwedzera kugona kwekugadzira. Inovhuvhuta Firimu Muchina unoshandiswa kupuruzira epurasitiki mafirimu senge yakaderera density polytene (LDPE), yakakwira density polytene (HDPE) uye Linear yakaderera density polytene (LLDPE). Kuvhuvhuta Firimu Muchina unoshandiswa zvakanyanya kugadzira masaga ekupakata echikafu, zvipfeko, marara bhegi uye vesti.
30% dhipoziti neT / T kana uchisimbisa iwo marongero, 70% chiyero neT / T isati yatumirwa.Kana isingachinjiki L / C pakuona
Mutengo wacho unosanganisira mubhadharo wekumisikidza, Kudzidzisa uye muturikiri, Zvisinei, iyo hama inodhura senge matikiti emhepo ekudzosa epasi rose pakati peChina nenyika yeMutengi, zvekufambisa zvemuno, pekugara (3 nyeredzi hotera), uye muhomwe mari pamunhu kune mainjiniya nemuturikiri kuberekwa nemutengi. Kana, mutengi anogona kuwana anodudzira muturikiri munharaunda. Kana panguva yeCovid19, uchaita online kana vhidhiyo kutsigirwa newhatsapp kana wechat software.
Garandi: mwedzi gumi nemaviri mushure meB / L zuva
Iyo yakanaka michina yepurasitiki indasitiri. Zvimwe zviri nyore uye zviri nyore kuita kugadzirisa, chengetedza mabasa uye mutengo kutsigira vatengi vedu vanoita zvakanyanya effierency.
LQSJ-B50、55、65、65-1, Michina Musoro Musoro Firimu Irovhuna Machine Set
Firimu Inovhuvhuta Muchina unoshandiswa kufuridza yakakwira-yakaderera kumanikidza polyethylene, iyo yanga ichishandiswa zvakanyanya kugadzira laminating firimu, kurongedza firimu, kurima kufukidza firimu, bhegi kana firimu yemachira uye zvipfeko nezvimwe zvekutakura zvinhu. Iyo huru mota inotora frequency kudzora mota kumhanya kunatsiridza kumhanya kudzora kugadzikana kwemota huru uye chengetedza magetsi ne30%. Iyo screw uye yemidziyo dhiramu inotora 38 chrome-molybdenum aluminium iyo yakave yakagadziriswa nitrogen uye traction furemu inotora yekusimudza mhando Hazvina mhosva kuti firimu iri rakaita sei, hombe kana diki, Firimu Rinovhuvhuta Muchina inogona kuwana yakanakisa mhedzisiro yekutonhora.
LQ-55 Ruviri-rukoko co-extrusion firimu ichivhuvhuta muchina, Firimu upamhi 800MM,
Firimu inovhuvhuta muchina inoshandiswa kufuridza epurasitiki laminated firimu ye low density polyethylene (LDPE) .Film ichivhuvhuta muchina unoshandiswa kune yakanyanya density polyethylene (HDPE) uye mutsara yakaderera density polyethylene (LLDPE) nezvimwewo Firimu firimu muchina unoshandiswa zvakanyanya kurongedza . Firimu ichivhuvhuta muchina unoshandiswa zvakanyanya kune yakadhindwa base zvinhu, zvigadzirwa zvekutengesa kunze uye zvigadzirwa zveindasitiri, nezvimwe.
LQ-A Nhevedzano Imwe Rukoko Firimu Inovhuvhuta Muchina
Tekinoroji Tsananguro uye kumisikidza Model LQ-A75-1500 LQ-A60-1000 LQ-A65-1200 Main chikamu chikuru mota 37KW inverter kudzora 22KW inverter kudzora 30KW inverter kudzora giya bhokisi 200 yakakwira-simba rakaoma zino pevhu 180 yakakwira-yakasimba yakasimba-yakasimba rakaomarara zino pevhu sikuru uye humburumbira 75 28: 1 60 30: 1 65 30: 1 sikuruu zvinhu 38Chromium molybdenum aluminium nitrogen kurapwa 38Chromium molybdenum aruminiyamu nitrogen kurapwa 38Chromium molybdenum alumi ...
LQ5L-1800 Mashanu-rukoko co-extrusion firimu ichivhuvhuta muchina
Chigadzirwa Tsananguro Nhanganyaya Iyi modhi yakagadzirirwa kumanikidza nekupakira meteriya ine yakakwira rebound simba inosanganisira akaomarara mapurasitiki. PET mabhodhoro, uswa, chipanji, machira uye zvimwe. Inorema-basa yakamira hydraulic baler ine mbiri-humburumbira bharanzi yekumanikidza dhizaini, uye inoshamisa hydrau-lic system yekupa inoenderera yakasimba simba mukati mekumanikidza. Iyo inogadzira yakakura kumanikidza simba kune bale yakakura mitoro. mativi mana ekuvhura chimiro ne "#" chimiro chekusunga capabilit ...
LQ-3GS1200 / 1500 Nhatu Dzedenga Firimu Iridza Muchina
Mushini unoshandiswa kugadzira firimu repurasitiki rakagadzirwa neyepasi density polyethylene (LDPE), yakakwira density polyethylene (HDPE)